Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A December 2011 (5)
Q and A December 2011 (5)
၁။ နှာခေါင်းနောက်ကနေ ချွဲတွေ အာခေါင်ထဲကို ခဏခဏ စီးကျနေပါတယ်။
၂။ ဘယ်လိုအားဆေးမျိုး သောက်ရမလဲ။ ပြီးတော့ ကျနော်က ပိန်တယ်
၃။ ဇနီး ဝမ်းချုပ်တာ ၁ ပတ်လောက်ရှိပါပြီ။
၄။ ကျွန်တော့် မျက်လုံးက ဘယ်ဘက်ကို စောင်းကြည့်၊
၅။ အူကျတာလို့ ထင်တာဘဲ။
၆။ My body got red spots.
အမည် (့)၊ အသက် ၂ဝ၊ နေရပ်လိပ်စာ ရန်ကုန်၊ ဝေဒနာ ကျွန်တော် နှာခေါင်းနောက်ကနေ ချွဲတွေ အာခေါင်ထဲကို ခဏခဏ စီးကျနေပါတယ်။ ပျောက်လိုက် ပြန်ဖြစ်လိုက်နဲ့ပါ။ အဲဒါနဲ့တွဲပြီး ခံတွင်းနံဆိုးတွေလဲထွက်ပါတယ်။ ရေခဏခဏ သောက်ရလွန်းလို့ အပေါ့ခဏခဏသွားနေရပါတယ်။ ဆေးညွှန်းလိုချင်ပါတယ်။ ပြန်မဖြစ်အောင်ကာကွယ်လို့ရပါသလား။ အရှေ့ ဘက် နှာစီးတာတော့ မဖြစ်ပါဘူး။ အာခေါင်ထဲမှာ တခုခုရှိနေသလို ခံစားနေရပါတယ်။ စီးနေတာကိုလဲ သိနေရပါတယ်။
ဖြစ်တာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။ ဘယ်ဆေးတွေသုံးနေသလဲ။ ဆရာဝန်ကိုပြဘူးသလား။ ဆေးစစ်သေးလား။ ဥပမာ ဓါတ်မှန်၊ အာလ်ထွာဆောင်း။
ကျနော် အသက် ၂၂ ပါ။ ကျနော်က ကိုယ့်ကို အသာဖြေပြီးရင် အားတော်တော်ကုန်တယ်။ တပတ်ကျော်ကျော် လောက်မှ အားပြန်ပြည့်လာပါတယ်။ ခြေထောက်တွေလည်း လှေကားတက်ရင် ညောင်းပါတယ်။ အဲဒါ ကျနော်အားမရှိလို့လား။ ဘယ်လိုအားဆေးမျိုး သောက်ရမလဲ။ ပြီးတော့ ကျနော်က ပိန်တယ် နည်းနည်းလေးဝချင်တယ်။
၁။ Weight gain လှရုံမက ဝချင်သေးရင် နဲ့
၂။ Tonics အားဆေး တွေကို ပို့လိုက်ပါတယ်။
ခုဆို ကျတော့် ဇနီး မီးဖွားတာ ၂ ပတ်ကျော်ရှိပါပြီ။ ရိုးရိုးပဲ မွေးတာပါ။ မိခင်ရော ကလေးပါ ကျန်းမာကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဇနီး ဝမ်းချုပ်တာ ၁ ပတ်လောက်ရှိပါပြီ။ ကလေးကိုလည်း နို့တိုက်နေတော့ ဆေးတွေလည်း မသောက်ရဲဖူး။
ဝမ်းချုပ်တာ မကောင်းပါ။ ရေ-အရည် များများသောက်စေပါ။ အသီအရွက် များများ စားပါ။ ဝမ်းလွယ်စာတွေတော့ သိမှာပေါ့။
Ducolax suppository ဝမ်းခြူတောင့်သုံးနိုင်တယ်။ ကလေးနို့တိုက်ရင်လဲ ကလေးဆီမရောက်နိုင်ဘူး။ Enema အဆီကို တခါသုံး ပလပ်စတစ်အိတ်လေးနဲ့လဲ လာတယ်။ ကောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော့် မျက်လုံးက ဘယ်ဘက်ကို စောင်းကြည့်၊ ညာဘက်ကို စောင်းကြည့်ရင် အောင့်တယ်။ ၂ဝ နှစ်ပါ။ ဖြစ်တာ ၃ ရက်ရှိပါပြီ။ ဘာဆေးသောက်ရမလဲ။
အောင့်တာသက်သက်ဆိုရင် Pain killer (NSAID) အနာ-အကိုက် ပျောက်ဆေး တခုခုကိုသာသောက်ပါ။ မျက်ရည်-မျက်ဝတ် ထွက်ရင် Antibiotic eye drop ခက်ပါ။ မျက်စိအကြည့်ရ အရင်လိုမကောင်းတရင် မျက်စိဆရာဝန်ပြပါ။
ကျွန်တော်က (့) မှာ အလုပ်လုပ်နေတာ ကြာပါပြီ။ အလုပ်က အလေးအပင်တွေ မရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်လောက်က စပြီး ကျွန်တော့် ဘောက အောင့်အောင့် လာပါတယ်။ အစကတော့ မနေနိုင်အောင် အောင့်ပါတယ်။ ကြာလာတော့ သိပ်ပြီး မအောင့်တော့ပါ။ မနေနိုင်အောင် မအောင့်ဘူးလို့ ပြောတာပါ။ အခုလည်း နေ့တိုင်း အောင့်နေတာပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ နေနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲမှာ ဘောက လေးနေတယ်လို့ အမြဲတန်း ခံစားနေရတယ်။ ဘောအောက် တည့်တည့်မှာ အကြော ၁ ချောင်းက အခွေလိုက်လေး ထောင်နေတယ်။ အကြောက သိသိသာသာကြီး ပေါ်နေတာလို့ ပြောတာပါ။ အူကျ (ဘောကျ) တာလို့ ထင်တာဘဲ။ ဘောကကြီးတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ အဲ့ဒါ ဘာရောဂါလို့ ခေါ်ပါသလဲ။ ခွဲစိပ်ရမယ့် အနေအထားလား။ ဆေးထိုးဆေးသောက်တာနဲ့ ပျောက်နိုင်ပါသလား။ မခွဲနိုင်သေးရင် ဘယ်လောက် ကြာကြာ နေနိုင်ပါသလဲ။ ဘယ်လို ကာကွယ်ထားသင့်သလဲ။
အောင့်တယ်ဆိုရင် အူကျတာ မဟုတ်ဘို့များပါတယ်။ အူကျတာက ခွဲစိတ်ရမယ်။ အရေးပေါ်မဟုတ်ရင် ဘယ်အချိန်ကျမှ ခွဲခွဲရပါတယ်။ တဘက်ထဲဖြစ်တာများတယ်။ လှဲလိုက်ရင်၊ အိပ်လိုက်ရင် အကောင်းပကတိပြန်ဝင်တယ်။ ကပ်ပဲ့အိတ် တဖက် ဒါမှမဟုတ် နှစ်ဘက် တဖြေးဖြေးနဲ့ ကြီးကြီးလာရင် မုတ်ရောဂါဖြစ်မယ်။ ဘယ်လောက်ကြီးကြီး မနာပါ။ အိပ်ပေမဲ့ ငယ်မသွားပါ။ ခွဲရမှာပါဘဲ။ နာတယ်ဆိုတာ များသောအားဖြင့် အကြော-အစေ့ရောင်တာနေမယ်။ နဲနဲလောက်သာ ပိုကြီးနေမယ်။ ပျောက်လိုက် ပေါ်လိုက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ပိုးကြောင့်ဖြစ်လို့ ပိုးသေဆေး နဲ့ အနာ-အရောင်သက်သာဆေးတွေပေးရတယ်။ Hernia, Hydrocele, Varicocele, Orchitis အားလုံးရေးထားပါတယ်။ ရှာဖတ်ပါ။ မတွေ့ရင် အနီးစပ်ဆုံးထင်တာကို ပြောပါ။ ပို့ပေးပါမယ်။
On Tue, Jan 3, 2012 at 9:20 AM,
My body got red spots. What's it? I took Burmeton. Some said it's allergic (အင်ပြင်). But it's happened to me since yesterday. Thanks!
၂။ Allergy medications (အလာဂျီ) ကို ဘယ်လို ကုသမလဲ